Windows 10: Firfircoon Samba si aad ugu xirto ilaha ku jira GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Sidee bay horeyba ugu ahayd dadweyne iyo aqoon ballaadhan, Samba waa mashruuc bilaash ah softiweer taas oo u oggolaanaysa hirgelinta Nidaamka wadaagga faylka Windows, ee Nidaamka Hawlgalka nooca UNIX, gaar ahaan kuwa bilaashka ah iyo kuwa furan sida GNU / Linux.
Samba soo baxay Windows 7 karti uyeelay Laakiin wixii markaa ka dambeeya, taasi waa, qaabkii hore Daaqadaha 8.X, iyo kan hadda jira, Windows 10, waa in gacanta lagu dhaqaajiyaa si loo sameeyo a kheyraadka la wadaago ee shabakad kombuyuutar leh kuwan Nidaamyada Hawlaha Gaarka ah, la ogaado oo lagu xiro kombiyuutar leh GNU / Linux. Taasina waa sababta ay muhiim u tahay in la ogaado habraaca loo hawlgelinayo oo lagu gaarayo ujeeddadan.
Borotokool Samba loo yaqaan sida SMB (Fariinta Server Server), iyo suugaanta qaarkood sida CIFS (Nidaamka Faylka Internetka ee Guud), ka baxsan si fudud u oggolaanshaha kombiyuutarada leh GNU / Linux, Mac OS X ama Unix Guud ahaan, way wadaagi karaan ama ku heli karaan ilaha shabakadaha Windows-ku-saleysan, runtiina waa meel codsiyada Unix ah taas oo fulisa Borotokoolka SMB, taas oo loo adeegsado hawlgallada macmiilka shabakad.
Sidan oo kale, kumbuyuutar Unix ama la mid ah Samba waxaad geli kartaa a Shabakada Microsoft, is tusay sida Server iyo / ama Macmiil, oo sidaas awoodi kara:
Arag oo sahaminta kumbuyuutarrada macaamiisha ee shabakadda, si loo fududeeyo wada shaqeynta iyo la macaamilka iyaga.
La wadaag oo marin u hel ilaha shabakadda, sida fayllada, feylasha, ama aaladaha sida diskiga, madbacadaha, iskaanrada, iyo waxqabadka badan.
Fududee xaqiijinta kombiyuutarada macmiilka iyada oo loo marinayo magac ka soo horjeedka bogga Windows.
U oggolow isdhexgalka iyo isdhexgalka Server Server Resolution Server (WINS) shabakadda Windows.
Ugu dambeyntii, ka hor intaadan si qoto dheer u gelin maadada, xusuusnow taas Windows 10, waa tan ugu casrisan uguna horumarsan Nidaamka Howlgalka ee Microsoft, ka 29 ee July ee 2015halka Windows 7 ka Janaayo 14 ee 2020, mar dambe ma leh Taageero rasmi ah oo la kordhiyay. Halka, Windows 8.1 la kulmi doonaa isla natiijada, ka Janaayo 10 ee 2023.
Sidaa darteed, ama iyaga ayaa lagu beddelaa iyada oo lacag la'aan ah Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan, sida GNU / Linux, ama waa inaad bixisaa qiimaha lagu cusbooneysiiyo Windows 10 sidaasna ay ku helaan taageero rasmi ah.
1 Sidee loo kiciyey Adeegga Samba ee Windows 10 si loogu xiro ilaha la wadaago ee GNU / Linux?
1.1 U fiirsasho iyo talooyin
1.2 Tallaabada 1
1.3 Tallaabada 2
1.4 Tallaabada 3
1.5 Tallaabada 4
1.6 Tallaabada 5
Sidee loo kiciyey Adeegga Samba ee Windows 10 si loogu xiro ilaha la wadaago ee GNU / Linux?
U fiirsasho iyo talooyin
Daraasaddeena kiis, waxaan u isticmaali doonaa 2 kombuyuutar jirka ah, mid leh Windows 10 midkalena leh MXLinux 19.1 (DEBIAN 10) on shabakad guri, taas oo ah, iyada oo aan lahayn shabakadaha shabakadaha. Kaliya a Router taas ayaa u xilsaaran Cinwaanada IP firfircoonaan.
Waxay ku habboon tahay in kombiyuutarka uu wato Windows 10 leeyihiin a Magaca kooxda y Kooxda Shaqada / Magaca Magaca la maamuli karo, taasi waa, gaaban, la akhrin karo oo sahlan in la xasuusto, haddii loo baahdo ama ay suurtagal tahay. Iyo sida ugu macquulsan, in Kooxda Shaqada / Magaca Magaca wuxuu la mid yahay kan lagu qaabeeyey kombiyuutar leh GNU / Linux.
U habee Magaca Kombuyuutarka iyo Kooxda-shaqada / Magaca Magaca
Isagoo u maleynaya in Magaca Kooxda Shaqada Shabakadda kombiyuutarka la leh GNU / Linux Badda "Guriga", waa inaad la tagtaa Computer-ka adoo wata Windows 10, ku jooji tabta la yiraahdo "Magaca kooxda" daaqadda ka soo "Qalabka guryaha", waxaa helay ikhtiyaarka ah Guddi xakameyn wac «Qalabaynta Qalabka Sare», Samee isbeddelka, sida ku cad sawirka isla markiiba hoosta.
Ma sameyn kartid isbeddelka laba-jabka ah hal mar, taasi waa, waa inaad "Magaca kooxda" marka hore iyo reboot, ka dibna magaca «Kooxda Shaqada " network iyo dib u bilaabi.
Sahlo muuqaalka SMB1.0 / CIFS ee Windows 10
Tallaabadan waa inaad marin u hesho "Waxyaabaha Windows" wadada "Guddi Xakameyn", "Barnaamijyo" iyo "Barnaamijyo iyo Astaamo". Markaad halkaa gaarto, waa inaad riixdaa (dhaqaajisaa) sanduuqa u dhigma "Taageerada borotokoolka wadaagista faylka ee SMB 1.0 / CIFS".
Markaas waa inaad riixdo badhanka "Dhaqaaji", sida ku cad sawirka isla markiiba hoos ka muuqda. Sida la doorbidayo, waa in dib loo kiciyaa si isbeddelada si buuxda loogu aqbalo.
Haddii la doonayo, sanduuqa hubinta ee "SMB toos ah" wixii ka horumarsan (adeegsiga) borotokoolka.
Xaqiiji oo awood u siiso taageerada SMB 1.X / 2.X / 3.X laga bilaabo Windows Power Shell
Si loo ogaado loona dhaqaajiyo / loo joojiyo iyada oo loo marayo Shell Windows Power, Hab maamuuska shabakada Samba ka Windows 10, amarrada soo socda ayaa loo fulin karaa kiis kasta:
Daraasadeena kiiska, labadaba maamuus ayaa la shaqeeyay, taas oo ah, SMB 1.0 iyo SMB 2.X / 3.X adoo adeegsanaya arjiga "Windows PowerShell ISE" sida "Maamulaha", taas oo ah tan ka muuqata sawirka isla markiiba hoos ka muuqda.
Daraasaddeena kiis, galka ayaa loo abuuri doonaa loona yaqaan "Tusaale" asalka u ah Nidaamka Hawlgalka Windows 10 la isticmaalay, halkaasoo loogu magac daray Isticmaalaha la magacaabay "Sysadmin" ("Maamulka", sida uu sheegayo baaraha faylka wadada "C: \_ Users \_ Admin". Kheyraadka la wadaago ee la sheegay waa in la abuuraa, iyadoo la doorbidayo marka lagu daro Isticmaalaha "Qof walba" leh dhammaan rukhsadaha amniga ee lagama maarmaanka ah, oo lala wadaago kiiskan, isla magaca shabakadda, taas oo ah, "Tusaale".
Sysadmin Magaca dhabta ah ee isticmaalaha: Admin
Dhammaan Meeleynta Isticmaalayaasha iyo Ogolaanshaha Amniga: galka «Tusaale»
Meeleynta magaca shabakadda "Tusaale": saamiga.
Bandhigga Kheyraadka Shabakadda: laga bilaabo Windows 10
Ku xir saamiga kombiyuutarka GNU / Linux
Tallaabadan, oo ka socota kombiyuutarka la yiraahdo "VITP2413" waxaan fureynaa a Faylka Xawilaadda kuweena Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, si loogu xiro Samba ilaa wadaag "Tusaale" ku yaal kombuyuutarka "VIT" que tiene Windows 10, sida ku cad sawirrada soo socda:
Wadahadalaha Faylka: in loo maro wadiiqada shabakadda "Smb: // vit / tusaale" dhinaca kheyraadka la wadaago ee kombiyuutarka la leh Windows 10.
Windows 10 Qalabka Halbeegga Isticmaalaha: isku xidhka samba.
La wadaag bandhig: on Windows 10 loo yaqaan "Tusaale" on GNU / Linux.
Ugu dambeyntiina, wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mawduucan, waad heli kartaa Xiriirinta rasmiga ah ee Microsoft ku saabsan.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «¿Cómo activar el Servicio de Samba en Windows 10 para conectar recursos compartidos en GNU/Linux?», taas oo ah hawlgal farsamo oo muhiim ah in la sameeyo, hadda taas «Windows 7», hadda ma ahan nooca xasilloon oo leh taageero rasmi ah «Microsoft»noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Windows 10: U oggolow Samba inay ku xirmaan ilaha GNU / Linux
Dhab ahaan, wixii Windows 10 uusan ku shaqeynin asal ahaan waa smb1, taas oo sababaha amniga ay kugula talineyso inaadan isticmaalin. Laakiin qaamuuska smb (cifs) wali wuu iska jiraa caadi. Waxyaabaha saxda ah waa in la xoojiyo isticmaalka smb2 iyo smb3 qaabeynta Samba ee mashiinka Linux kaas oo aan rabo inaan kula wadaago fayl
Jawaab Camilo Gómez A.
Salaan Camilo! Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo cadeynta mawduuca laga hadlay.
Faylasha la wadaago ee Windows ayaa xitaa laga heli karaa Linux amarka soo socda: Mount -t cifs // ip / resource / mount_point -o domain = domain, username = user
Halbeegga "domain" waa la isticmaali lahaa haddii kumbuyuutarka Windows-ku uu ku jiro qaybta Diiwaanka Firfircoon.
Jawaab Gonzalo Montes de Oca
Salaan Gonzalo! Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo wax ku biirinta mowduuca laga hadlay. Mararka qaarkood, way ka fiican tahay inaad xiriir ku samayso terminaal marka loo eego garaafka.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Cloudflare Developers' waxay ka shaqeeyaan Jaangooyooyinka si loo Dardar-geliyo Diiwaangelinta Disk-ka ee Linux
Chrome 82 weligeed ma imaaneyso, Chrome 83 wuxuu noqon doonaa nooca xiga ee la sii deyn doono